စက်ဘီးအတွက် Ring Bell ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး စက်ဘီးအတွက် Ring Bell မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
ကျနော်တို့ကနေတင်ပို့သူများမှာ Taiwan ချမှတ် စက်ဘီးအတွက် Ring Bell။ ၎င်း၏အလွန်ကြီးမားသောကုန်သွယ်ရေးအသိပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကုမ္ပဏီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခုန်ခြင်းနှင့်မှတ်သားလာခဲ့သည်။ "အရည်အသွေး, အရေအတွက် & အချိန်မီပေးပို့ခြင်း" ကြှနျုပျတို့ဆောင်ပုဒ်မှကျူးလွန်ကျနော်တို့လက်ရှိတွင်လက်လီအရောင်းဆိုင်, ဧည့်ဝတ် & ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကျွန်တော်တို့၏အတောင်တို့ကိုချဲ့ထွင်ရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွဲ, ဖြန့်ဖြူး, ဝယ်လက်, အေးဂျင့်များနှင့် OEM / နှစ်ဖွဲ့မှ Enquiry ကြိုဆိုဖြစ်ကြသည်။
ပုံစံ - JH8
ITEM:MINI BRASS BELL
ဆး.ဒဗလျူ.:8 KGS G.ဒဗလျူ.:10 KGS CUFT:၁.၁
ချိန်ညှိနိုင်သောစက်ဘီးခေါင်းလောင်း:ချိန်ညှိနိုင်သောသားရေကွင်းများ,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းချိန်ညှိရန်လွယ်ကူသည်;အချင်း ၂၂ မှစက်ဘီးလက်ကိုင်အများစုအတွက်သင့်တော်သည်-၃၅ မီလီမီတာ/၀ ယ်သည်.၈၇-၁.၃၈ လက်မ;၎င်းသည်ကွဲပြားသောစက်ဘီးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/ring-bell-for-bike.html
အကောင်းဆုံး စက်ဘီးအတွက် Ring Bell ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် စက်ဘီးအတွက် Ring Bell ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan